Ọkachamara Semalt: 5 Mmetụta Dị Ahịa Digital Marketing Maka 2017
Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ọ bụla na-ezutekarị mmepụta ihe na mgbanwe na dijitalụgburugburu ebe obibi. Ọnụ ọgụgụ nke mgbanwe na-abụkarị mgbe ọ na-adịghị agbanwe agbanwe na mgbe ụfọdụ. Akụkọ ihe mere eme na-egosi na ikwere na evolushọn bụ nanị ụzọiji lanarị gburugburu ebe obibi na-agbanwe agbanwe.
N'afọ 2016, ndị dijitalụ na-agagharị agagharị ka ha chegharịa ebe obibi ahịa. Nanrịgo elu nke nchịkwa na-achịkwa ụwa ejirila larịị, nke ga-abụ ihe na-adighi njọ na njem ihuenyo - نقل الاثاث. Ebe dị ka Pinterest na Snapchatna-eto ma na-adọta ndị ọrụ mgbe niile. Ihe omume ndị dị ugbu a egosiwo na ndị eletrik eji echere.
Site na nmuta nke na-arụ ọrụ na obere ụlọ ọrụ dị nta ma ọ bụ nke dị nta,anyị emeela mgbanwe dị iche iche ruo ọtụtụ afọ-na-atụ anya okwu ọhụrụ ma na-achọpụta ohere ọhụrụ, Wepụ ma ọ bụ gbanwee: na anyị, nke aokwu a bụ eziokwu. Dị ka ndị dị otú a, n'oge ọ bụla, anyị na-elekwasị anya na mmiri iji gbalịa ma hụ ihe dị n'ọdịnihu.
Ná mmalite nke ọkara nke atọ nke 2017, onye ọkachamara si n'aka Shiol ,Nik Chaykovskiy, chịkọtara ndepụta nke ọnọdụ ndị bụ isi nke ahịa dijitalụ iji nyere ndị mgbasa ozi aka ịkwalite site na mmemme ọhụrụ ndị a.
1. Mobile na-agwa ndị na-ere ahịa ugbu a
N'iji igwe eji eme ihe n 'ugbua ejiriwo nyochaa site na nnyocha PewỤlọ ọrụ na-egosi na pasent 77 nke ụmụ amaala US nwere ama. Ihe ndekọ afọ a ga-egosi na smartphones bụ ndị ahịa kachasị mmaihe kachasị amasị onye mmekọ ịzụ ahịa.
Ama nwere ike ịlele nyochaa ngwaahịa ugbu a, kwadoro ngwaahịa, ma meeịzụta na enyemaka nke ihe nchọgharị. Ọnụego nke ngwaọrụ ndị a na-etinye n'ime ndụ anyị kwa ụbọchị na-eme ka ha bụrụ akụkụ nke ọdịbendị anyị.
2. Ịgba Ngwudata Ntaneti Na-enweta Ntugharị Na-aga n'ihu
N'afọ 2015, Meerkat, bụ onye na-agba ndụ na-agba ọsọ na-arụ ọrụ, ọ bụkwa ihe ọhụrụ.Otu afọ mgbe e mesịrị, ụlọ ọrụ mgbasa ozi kachasị mma si na Facebook, Twitter, Instagram, na YouTube.
Ịgba egwu ndụ na-enye ndị ahịa na ndị na-ere ahịa ihe na-asọ oyi karịa ndị ọzọnyocha ebe ọ na-eme ka ahụmahụ ndị ahịa nweta. Nkwurịta okwu na-echekwa nke ọma na-eme ka otu ika nwee ike ime ka nghọta na-enye akammekọrịta nke a na-esitebeghị na mbụ.
3. Nnukwu data na-eme ka mmadụ bụrụzie
Nnukwu data aghọwo ihe dị mkpa n'ịme ka ahụmịhe njirimara onye ọrụ. Amazon,Spotify, na Netflix bụ ihe atụ nke nnukwu ụlọ ọrụ na-ebuli na nnukwu data na ebumnuche inye ndị ọrụ na elu ogo nkenhazi nkeonwe. Nrịbawanye na data na-enye aka otu ika iji mee ka amụma dị mma karị na elekwasị anya nke na-akpata ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ.
4. Ahịa Ịzụ ahịa bụ More Present
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa ahụ na-eleba anya na ịmepụta ngwá ọrụ ahịa dị oke egwummewere nke ihe ịga nke oma. A na-ejizi akpaaka iji kọwaa akụkụ nke ahịa ahịa.
5. Mgbasa Mgbasa Ozi Na-akwado Ịzụ ahịa Ahịa
Ahịa ahịa na-eme ka ihe dị mma maka ọdịnaya ọjọọ. Nnukwuolu nke data dị ugbu a amanyewo ndị na-emepụta ihe ọhụrụ ịkọwa ụzọ dị mma iji tinye aka na ndị na-ege ha ntị na atụmatụ ha iji tinye aka na ndị ọrụahụmahụ di iche.
Ọganihu kachasị mma, nnukwu ma ọ bụ obere na-amanye ịmalite ma mebieatumatu ohuru nke imeputa nkwado. Ilekwasị anya n'ihe ndị a kpọtụrụ aha n'elu na imekọrita ha bụ nzọụkwụ dị ukwuu maka ịtọgheohere ahịa dị iche iche.